Mashiinka Calaamadeynta, Mashiinka xirxirida Dharka Laabista - UBL
Hawsha Qalabka 1. Qalabkaan taxanaha ah wuxuu ka kooban yahay tusaalaha aasaasiga ah ee FC-M152A, kaas oo loo adeegsan karo in mar iyo laba mar la isku laabo dharka, loo laabto hal ama laba jeer, si otomaatig ah loogu quudiyo bacaha balaastigga ah iyo buuxinta boorsooyinka si otomaatig ah. 2. Qaybaha wax -qabadka waxaa lagu dari karaa sida soo socota: qeybaha shaabadaynta kulul ee otomaatiga ah, qaybaha xirmidda jeexitaanka otomaatigga ah, qaybaha is -haynta tooska ah.Qeybaha waxaa lagu dari karaa iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalka. 3. Qayb kasta oo ka mid ah qalabka ...
Hawsha Qalabka 1. Qalabkaan taxanaha ah wuxuu ka kooban yahay tusaalaha aasaasiga ah ee FC-M412A, kaas oo loo adeegsan karo in mar iyo laba mar la isku laabo dharka, loo laabto hal ama laba jeer, si otomaatig ah loogu quudiyo bacaha balaastigga ah iyo buuxinta boorsooyinka si otomaatig ah. 2. Qaybaha wax -qabadka waxaa lagu dari karaa sida soo socota: qeybaha shaabadaynta kulul ee otomaatiga ah, qaybaha xirmidda jeexitaanka otomaatigga ah, qaybaha is -haynta tooska ah.Qeybaha waxaa lagu dari karaa iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalka. 3. Qayb kasta oo ka mid ah ...
Suudhka Ilaalinta Qaliinka makiinadda xirxirida laabashada Qalabka Qalabka ③. Qayb kasta oo ka mid ah qalabka waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan shardiga xawaaraha ee 600PCS /H. Isku -darka kasta wuxuu ku gaari karaa xawaarahaan hawlgalka guud. ④. Is -dhexgalka soo -gelinta aaladda waa is -dhexgalka taabashada shaashadda taabashada, kaas oo kaydin kara ilaa 99 nooc oo isku -laalaab dhar ah, xirxirid, xirid iyo xirmooyin hawlgal xulasho fudud. Astaamaha Qalabka machines Mashiinnadayada waxaa loo qaabeeyey ...
Shaqada Qalabka ①. Qalabkan taxanaha ah wuxuu ka kooban yahay tusaalaha aasaasiga ah ee FT-M112A, kaas oo loo adeegsan karo in mar loo maro marna bidix iyo midig, loo laabto mid ama laba jeer oo dheer, si otomaatig ah loogu quudiyo bacaha balaastigga ah loona buuxiyo boorsooyinka si otomaatig ah. ②. Qeybaha wax -qabadka waxaa lagu dari karaa sida soo socota: qeybaha shaabadaynta kulul ee otomaatiga ah, qeybaha shaabadaynta jeexitaanka otomaatiga ah, qeybaha wax lagu dhejiyo. ③. Qayb kasta oo ka mid ah qalabka ...
Hordhac Badeecad Mashiinka gadaal -marinta, oo sida badan loo yaqaanno mashiinka wax lagu xiro, waa adeegsiga dhejiska wax lagu duubo ama baakadaha baakadaha, ka dibna adkee oo isku qas labada daraf ee alaabta suunka baakadaha iyada oo loo marayo saamaynta kuleylka ee mashiinka. Shaqada mashiinka dhejiska ayaa ah inay ka dhigto suunka caagga ah meel u dhow dusha xirmada xirmada, si loo hubiyo in xirmada aysan ku kala firdhin gaadiidka iyo kaydinta sababta oo ah xirxirku ma adka, isla ...
Faahfaahinta badeecadda: Goobta Asalka: Shiinaha Magaca Magaca: Shahaadada UBL: CE. SGS, ISO9001: 2015 Number Number: UBL-T-400 Payment & Shuruudaha Maraakiibta: Tirada ugu Yar ee Tirada: 1 Qiimaha: Faahfaahinta Baakadaha diidmada: Sanduuqyada Qoryaha Waqtiga Bixinta: 20-25 maalmaha shaqada Shuruudaha Bixinta: Western Union, T/T, MoneyGram Awoodda Bixinta: 25 Go'an Bil kasta Halbeegga Farsamada Mashiinka dhalada wareegsan ee otomaatiga ah Nooca UBL-T-400 Tirada Calaamadda Hal summad hal mar Xaqiijinta ± 1mm ​​Xawaaraha 30 ~ 200pcs/min Label s ...
Astaamaha Waxqabadka: Kala -soocidda kaarka deggan: kala -soocid horumarsan - tiknoolajiyadda suul -gacmeedka ee dambe ayaa loo adeegsadaa kala -soocidda kaarka; heerka kala soociddu aad ayuu uga sarreeyaa hababka kala -soocidda kaarka caadiga ah; Kala -soocidda kaarka degdegga ah iyo sumad -siinta: si loola socdo calaamadaynta koodhka kiisaska daroogada, xawaaraha wax -soo -saarku wuxuu gaari karaa 200 maqaal/daqiiqad ama ka badan; Baaxadda codsiga ballaaran: taageeridda ku calaamadinta dhammaan kaararka, xaashiyaha waraaqaha, iyo kartoonnada aan la furin; Xaqiijinta calaamadaynta deggan: giraangirta la -qabsiga waxaa loo adeegsadaa ...
WAXYAABAHA: DHAQANKA AHAANSHAHA AHAANKA AHAANKA AH: SAXIIXINTA TILMAAMAHA Buugga: ± 0.5mm LA HELI KARO: Khamri, Cabitaan, Can, Jar, Dhalo Caafimaad iwm , tiir, tuubbo caag ah, jelly, lollipop, qaaddo, suxuunta la tuuro, iwm. Isku laab calaamadda. Waxay noqon kartaa calaamadda daloolka diyaaradda. Qaabka Halbeegga Farsamada UBL-T-107 Xaqiijinta Calaamadeynta ± 0.5mm La ...
Huan Lian —— mashiinka calaamadeynta iyo bixiyaha xalka baakadaha caqliga leh!
Dongguan Huan Lian Automation Equipment Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa magaalada wax soo saarka caanka ah ee Shiinaha-Dongguan City.Is waa ururinta cilmi-baarista teknolojiyadda iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta, hawlgalka sida mid ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ee farsamada sare leh. Shirkadda waxaa ka go'an inay wax ku biiriso "Made in China 2025 ″. Ku-saleysan ganacsiga ugu weyn ee khadadka wax-soo-saarka baakadaha otomaatiga ah ee shirkadda waalidka, shirkaddu waxay sameysay koox ganacsi hoosaad ah oo ku jirta cilmiga deegaanka silsiladda warshadaha ee daabacaadda sumadda is-dhejiska, mashiinka saxda ah, biraha xaashida otomaatiga ah, mashiinnada baakadaha dharka caqliga leh iyo wixii la mid ah.
DHACDOOYINKA & GANACSIGA
Calaamadiyaha Dhalada Beerka, Mashiinka Xirmada Dharka, Mashiinka Calaamadinta Dhalada, Labeller Dhalo, Calaamadiyaha Dhalada Khamriga, Calaamadiyaha Dhalada,